Imidlalo yeMidlalo yeOlimpiki yenye yezona ziganeko ezilindeleke kakhulu kwihlabathi lemidlalo namhlanje. Imidlalo iyona mcimbi omkhulu, ukhangela abadlali abavela kwilizwe eliphantse. Nangona iphendukele ekuthengiseni nasekuthengiseni i-behemoth, injongo yangaphambili yeMidlalo ye-Olimpiki yayingaphantsi kakhulu. Ngethuba leminyaka yokuqala yee-Olimpiki, iziganeko zenziwa njengeyona ndlela yokuqokelela i-multimillion-dollar, kodwa ukuhlonela oothixo baseGrisi yamandulo.
Iphelele yePagan Entertainment Package
U-Theodora Siarkou, kwindlalifa yomfundisi, ukhanyisa ilangabi le-Olimpiki. Milos Bicanski / Getty Izithombe
Imidlalo yokuqala yeOlimpiki iye yabizwa ngokuthi "ipakethe yokuzonwabisa yonqulo yama-pagan" ngumbhali uTony Perrottet, umbhali we -Naked Olympic: Inyaniso Eyona yeMidlalo yamandulo . Imidlalo ibonisa ubugcisa, ukufundwa kweenkondlo, abalobi, imidlalo, abadwebi kunye nabadwebi. Kwakukho imiboniso yesitalato eyayifake umlilo wokudla, izigulisi, abadansi, izixhobo zokugcoba, kunye nabafundi besundu.
Kwakhona kwakubalulekile ukuba imfazwe yafakwa kwiMidlalo. Ngelixa amaGrike ayesazi kakuhle kunokuba azame ukwakha iilwimi ezihlala ziintshaba zawo, kwaqondwa ukuba kukho ukuxhatshazwa kokulwa ngexesha le-Olimpiki. Oku kwavumela abagijimi, abathengisi kunye nabalandeli ukuba bahambe ngokukhuselekileyo baze bavela kwidolophu iMidlalo, ngaphandle kokukhathazeka ngokuhlaselwa ngamagqabi ahlawulayo.
Imidlalo yokuqala yokubhaliweyo yabanjwa ngo-776 BCE, kumathafeni ase-Olympia, eyinxalenye yePeleponnese. Ukongezelela kwiindawo zokuhlala kunye nezakhiwo zezemidlalo, iOlimia yayiyindlu yetempile enkulu kaZeus, enethempelini elikhulu kuHera eyayisondele kufuphi. Ngokwezinye iimbali, iMidlalo yasungulwa ngu-Idaios Herakles, omnye we-Daktyloi, ukuhlonipha uZeus, owayemncedise ukuphumelela empini. Idaios Herakles ekugqibeleni yaqatshelwa neqhawe likaHerakles, unyana kaZeus, owamphakamisa kwiingcali ezifana nomsunguli weMidlalo.
UDiodorus Siculus wabhala:
"Kwaye ababhali basitshela ukuba omnye wabo [iDadtyloi (Dactyls)] wayebizwa ngokuba yiHerakles (iHeracles), kwaye egqwesileyo njengoko wenzayo ngodumo, wamisa iMidlalo yeOlimpiki, kwaye ukuba amadoda asemva kamva, ngenxa yokuba igama Kwakunjalo, ukuba wayengunyana we-Alkmene (Alcmena) [oko kukuthi iHerakles of Labors 12] owamisela i-Olympic Games. "
Ukuhlawula umvuzo kwiZeus
Umdlali onqobayo unqatyisiweyo ngesebe lomnquma kule nqwawa yamandulo. DEA / G. DAGLI ORTI / Getty Izithombe
Kubemi baseGrisi, iiOlimpiki kwakuyixesha lokubhiyozela kakhulu inkolo. Iziganeko zezemidlalo zazixutywe kunye nemihlatshelo, imasiko kunye nomthandazo, kunye nokuzonwabisa okukhulu kunye nemimoncoko. Kwiminyaka engaphezu kwewaka, iMidlalo yayiqhutywe kwiminyaka emine, eyabenzekanga nje isiganeko semidlalo esinde kunabo bonke emlandweni, kodwa enye yezona zihlandlo eziqhelekileyo eziqhubekayo zonqulo.
Le midlalo yayibanjwe ekuqaleni kukaZeus, ukumkani wama-Olympians. Imidlalo yokuqala yayingumcimbi owodwa kuphela wezemidlalo. Kwakuyi-footrace, eyadlalwa ngumpheki ogama linguKrobois. Abadlali ababethelela imihla ngemihla uZeus (ngokuqhelekileyo ihagu okanye izimvu, kodwa ezinye izilwanyana zenza njalo), enethemba lokuba uya kuziqonda kwaye azizukise ngobuchule kunye neetalente zabo. Ngethuba lokuvulwa kwemibala, abagijimi bahlala phambi kwesigxina esikhulu sikaZeus esibambe isibhakabhaka, baza bafungela isifungo kuye ethempelini lakhe e-Olympia.
Zonke iindlela ezikhokelela kwiiOlimpiki
Enye yeemidlalo ezivela kumaOlimpiki eAthene. I-WIN-Initiative / Getty Izithombe
Abadlali bezemidlalo bathathe inxaxheba kwiimeko ezidityanisiweyo. Nangona kungekho sizathu esicacileyo sokuba kutheni le nto kunjalo, iimbali-mlando zibonisa ukuba kulungelelaniso lwamadoda aseGrike amancinci. Nayiphi na indoda yaseGrike, kungakhathaliseki ukuba isigaba sentlalo, sinokuthatha inxaxheba. Ngokwewebhusayithi yeOlimpiki,
"I-Orsippos, jikelele ukusuka kuMegara; Polymnistor, umalusi; UDiagoras, ilungu losapho lobukhosi baseRhodes; UAlexander I, unyana ka-Amyndas kunye noKumkani waseMakedoni; kunye noDemocritus, ifilosofi, bonke babemdla kwiMidlalo. "
Ubuncwane bubalulekile kumaGrike kwaye abazange bakhathazeke yiyo. Nangona kunjalo, ezinye iinkcubeko zangexesha zafumanisa-ukubeka ukuba amaGrike ayenamafutha kunye kunye nokujikeleza kwinqanaba lokubambana. AmaYiputa namaPersi abavakalelwa kukuba kukho into encinci malunga nento yonke.
Ngelixa abafazi abaselula bevunyelwe ukuba baye kwiMidlalo xa beziswa njengendwendwe nguyise okanye umzalwana wabo, abafazi abatshatiweyo abazange bafike kwimikhosi. Amakhoboka ayekuyo yonke indawo kwii-Olimpiki, kwaye ayehlala ekhutshwa ngabahwebi bevela kude. Ihenyukazi inokukwenza imali eninzi ngexesha lesiganeko esikhulu njengeMidlalo yeOlimpiki. Ngamanye amaxesha, abantu abangama-40,000 baboniswa, ngoko ke kwakukho abathengi abaninzi. Ezinye zehenyukazi zazingama- hetaeras , okanye ama-escorts aphezulu, kodwa abaninzi babengabafundisi beetempile abazinikezele ku- Aphrodite, unkulunkulukazi wothando .
Umfazi wokuqala ukunyanisekisa kwimidlalo njengoko umdlali wayenguKyniska, onguyise owayenkosi yaseSparta. I-Kyniska inqobile imikhosi yeenqwelo-moya ngo-396 BCE nangama-392 BCE Nangona isithintelo sabasetyhini bekhona, uKyniska wakwazi ukuhamba nale nto ngenxa yokuba, ngokwemiqathango ye-Olimpiki yelo xesha, kwimimandla ye-equestrian umnikazi wehashe, kunokuba umgibeli , wayebhekwa njengowinqobileyo. Ekubeni i-Kyniska ayengenayo ihashe ngokukrazula inqwelo yakhe, wakwazi ukukhuphisana nokuphumelela. Kamva wavunyelwa ukuba abeke umfanekiso wakhe ethempelini likaZeus, kunye nalabo abaphumeleleyo, ngokubhaliweyo, " Ndiyazi ukuba mna ngowona wesifazane oseHellas ukuphumelela lo myalelo."
Ukuphela kweMiddle Olympic
Ilangabi le-Olimpiki libhekiselwe kwisithethe esicacileyo. Mike Hewitt / Getty Images
Malunga no-400 CE, umbusi waseRoma uTheodosius wagqiba iMidlalo yamaOlimpiki yayingumhedeni, kwaye yayivalwe ngokupheleleyo. Le nxalenye yayiyinxalenye yokuguquka koBukumkani bamaRoma ukuya ebuKristwini. Ngethuba lobuncinci boLutsha, wayefundiswa ngubhishophu u- Ambrose waseMilan . UTheodosius wadlulisela imithetho emininzi eyayenzelwe ukuqeda ubuhedeni bamaGrike namaRoma ngokupheleleyo, kunye nokulahla imicimbi kunye nemikhosi eyayibhiyozela inkolo yamandulo yamaGrike neRoma.
Ukwenza ubuKristu inkolo yombuso, zonke iindlela zokudala zafuneka zipheliswe, kwaye ziquka iMidlalo yeOlimpiki. Nangona uTheodosius wayengatsho ngokuthe ngqo ukuba iMidlalo ayisayi kukhangela, ekufuneni kwakhe ubuKristu inkolelo yokuqala yoBukumkani baseRoma, wavala yonke imigaqo yamaPagan yamandulo ehambelana namaOlimpiki.
Emva koko, ngokwembali yembhali uGlanville Downey,
"Ukusekwa koMbuso wobuKristu ngokwemvelo kwazisa utshintsho oluthile kumdlalo we midlalo. Ukususela kwimbono yabaseLibhan kunye nabanye abahedeni abazalwana, umkhosi wezemikhosi wawungagcini; kodwa ayengasayi kuthathwa ngokusemthethweni njengomthendeleko ohloniphekileyo kwi-Olympian Zeus. Ngaphezu koko, imidlalo kufuneka ilahlekelwe yimimandla yenkonzo yobukhosi ababeyakuba nayo ngaphambili. "
Tony Perrottet, i-Olympic Naked
Imbali yeMbali yeMbali yeOlimpiki
UWendy J. Raschke , I-Archaeology yama-Olymics-Iimidlalo ze-Olimpiki kunye nezinye iMithendeleko e-Antiquity. IYunivesithi yaseWisconsin Press, 2002.
Nini i Corpus Christi?
I-Socialology yeBlack Shooters
Umthengi Qaphela: Yintoni ekujongeni xa uthengela i-Mustang ye-Classic
50 I-Valentine Day Day Iingoma Zothando Zonke Ixesha
IiNkqubo zoLwandle lwePalenque - Ulawulo lwamanzi lwaMandulo lwamaMaya
Uluhlu lweeNkqubo ezili-10 zeNgcali zeKholeji zeKholeji kwiMbali
UKarl Marx kwiNkolo njengeOpium yeBantu